Health & Beauty – SoShwe
3 days ago	Health & Beauty 0
ကျန်းကျန်းမာမာရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အဝလွန်တာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ၊ စိတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါလို ရောဂါများစွာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတာက သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာအများစုကနေ ကင်းဝေးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတာကို အသက်အရွယ်မရွေး လုပ်လို့ရပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပါ တိုးတက်စေနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ . . . ၁။ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကိုယ်လက်စထရောများတာ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါလို နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပုံမှန်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတာက သွေးလည်ပတ်မှု …
4 days ago	Health & Beauty 0
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ . . . သင်ခန်းစာအသစ်တွေလေ့လာရင်း ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းတွေနဲ့အတူ . . . ပဟေဠိတွေလည်း ဆော့လိုက်ရအောင် . . . အိုဗာတင်းရဲ့“Ovaltine Smartbook” ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့ဆိုရင် သားသားမီးမီးတို့အားလုံး ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာလေးကိုဖန်တီးနိုင်ပြီပေါ့ . . . တီထွင်နိုင်စွမ်းတိုးပြီး ပိုမိုထက်မြက်တဲ့ ချန်ပီယံလေးဖြစ်ဖို့ အိုဗာတင်း PowerMaxx ကို နေ့စဉ်သောက်ပြီး Ovaltine Smartbook App ကို သုံးကြစို့ . . . Application Download Link တွေကတော့ . . . ios link – …
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်အစားဆုံးကတော့ ရာသီပေါ်ဒူးရင်းသီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အပူပိုင်းဒေသတွေအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာတို့မှာ အဓိကပေါက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ရာသီစာဒူးရင်းသီးကို သူရဲ့ အရသာကြောင့် ကြိုက်တဲ့သူအများကြီးရှိပေမယ့်လည်း အနံ့ကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ လူတော်တော်များများကလည်း အရသာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အနံ့ကိုမကြိုက်ရင် မစားကြတာဆိုတော့ ဒူးရင်းသီးကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ မကြိုက်တဲ့လူဆိုပြီး အုပ်စုကွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်း ဒူးရင်းသီးဆို ဈေးဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဝယ်စားကြပြီး၊ မကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်း ဒူးရင်းသီးဆို အနံ့တောင်မခံနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဒူးရင်းသီးကို စားသင့်၊ မစားသင့်ဆိုတာကို အချက် ၅ ချက်နဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ၁။ …
ကျန်းမာရေးအတွက် တွဲဖက်စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ။
၁။ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်မယ့် ပန်းသီးနဲ့ ရက်စ်ဘယ်ရီသီး။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုအရ ရက်စ်ဘယ်ရီသီး၊ သလဲသီး၊ သစ်ကြားသီးနဲ့ ချဉ်တဲ့အသီးတွေမှာပါတဲ့ Antioxidant ellagic acid ဟာ ပန်းသီး၊ စပျစ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်နီတို့မှာပါတဲ့ antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Quercetin ကို မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ တစ်နေ့လုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့အားအင်ကို ပြည့်ဝစေဖို့အတွက် ကြက်သွန်နီနဲ့ ကုလားပဲ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က လေ့လာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုအရ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်တို့မှာပါတဲ့ Sulphur Compound ဓာတ်တွေဟာ စပါး၊ ပြောင်း၊ ဂျုံနဲ့ ကုလားပဲအပါအဝင် အခြားပဲတွေမှာပါတဲ့ သံဓာတ်နဲ့ Zinc ဓာတ်တို့ကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် …
စိတ်ဖိစီးမှုတွေမှ သက်သာလာစေရန် မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို ပြုမူ နေထိုင်မလဲ ? ? ?
၁။ ချော့ကလက်ပူပူလေးသောက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ သက်သာလာစေရန် မိမိကိုယ်ကို နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး မိမိစိတ်ကို ပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်း စိတ်ဖိစီးမှု များနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ချော့ကလက်ပူပူလေးတစ်ခွက်ဖျော်ပြီး သင့်အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သိသိသာသာ လျော့ကျလာမှာပါ။ ၂။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကလေးငယ်လေးများနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်နေပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကလေးငယ်လေးများနဲ့ ဆော့ကစားခြင်း၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းတို့ကလည်း သင့်စိတ်ကို အပန်းဖြေစေရုံမျှမက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးငယ်လေးများရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုကြည့်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ပျော်ရွှင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ အပျင်းပြေ …
၁။ နေ့စဉ် ပုံမှန်ပြေးပါ။ သင်သိထားသမျှ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေထဲမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အေရိုးဗစ်လို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ပြေးတာက သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ နှလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ မကြာသေးမီက ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် တစ်နာရီပြေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့သက်တမ်းကို ၇ နာရီပိုရှည်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသထားပါတယ်။ ပုံမှန်ပြေးလေ့ရှိတဲ့့လူတွေဟာ ၂၅% ကနေ ၄၀% အထိ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သေဆုံးနိုင်ချေနည်းပြီး တခြားသူတွေထက် ၃ နှစ်လောက်ပိုပြီး အသက်ရှည်ကြတယ်လို့ လေ့လာချက်တစ်ခုက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြေးလေ့ရှိတဲ့လူတွေက ပိုကျန်းမာသလိုပဲ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူအများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ Piedmont ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနရဲ့ Director ဖြစ်သူ Jennifer Kuca Hopper က …
စိတ်ဖိစီးမှုများမှ အမြန်ဆုံး သက်သာလာစေရန် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်မလဲ ? ? ?
၁။ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ့် ဟာသဇာတ်မြူးကားကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ဖိစီးနေရတယ်လို့ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ပထမဦးဆုံး အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး ထိုင်ခုံတစ်လုံးယူကာ သင့်ကို စိတ်အပန်းပြေစေနိုင်မယ့်၊ သင့်ကို ရယ်မောအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ဟာသဇာတ်မြူးကားကို ကြည့်ပါ။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ ရယ်မောခြင်းဟာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေခြင်းမှ သက်သာစေရုံမက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ၂။ Gym ကစားပေးပါ။ လေ့ကျင်းခန်းပြုလုပ်ခြင်းကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေတယ်ဆိုပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရ သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းအောင်လည်း အကူအညီပေးပါတယ်။ နေ့စဉ်ပုံမှန် မိနစ်(၂၀)ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ Social Media …
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဟိုဟာက ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်၊ ဒီဟာက ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ် စသဖြင့် အမြဲကြားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လူအများထင်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီးနောက် ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပလပ်စတစ် ရေသန့်ဘူးခွံ။ ၂။ အပူခံ ပလပ်စတစ်ဘူးခွံ။ ၃။ Microwave နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့အစားအစာများ။ ၄။ Dryer Sheets ၅။ သဘာဝကျကျ ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ နို့မှုန့်ထုပ်။ ၆။ ဖယောင်းသုတ်ထားသော ပန်းသီး။ ၇။ တစ်ခါသုံး တူ။ ၈။ ရေခဲရေ။ ၉။ ဆူပွက်နေသော ရေပူ။ ၁၀။ ကားအဲယားကွန်း။ ၁၁။ E-cigarettes ၁၂။ သွားအတုစိုက်ခြင်း။ ၁၃။ ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်း။ …